Uummanni kumaan lakaa’amu qorra nama addoochu kan magaalaa New York halkan edaa keessa dhaabachuu dhaan waggaa haaraa bara 2018 simatanii jiran. Ayyaana waggaa akkasitti simachuun bara 1904 keessa jalqabame.
Kan Sochii #MeToo jechamu kan farra dararaa quunnamtii saalaaf gurmaa’e ka jalqaban qabsooftuun mirga namaa Tarana Burke kubbaa guddaa yeroo ayyaana wagga bakka ol aanaa irra kaa’amuun gad darbachuuf furtuu kaastuutti bu’an.
Barri 2017 waa’een dararaa fi doorsisa quunnamtii salaa ilaalchisee jijjiiramni itti argame yoo ta’u hedduunis ennaa taatolee beekamoo, miseensonni mana maree fi hoogganoonnui daldalaa hedduun himannaan dararaa kanaa irratti dhiyaatettti sochii kana deggeranii jrian.
Burke akka jedhanitti waggaa haaraa kana kan jalqabnu addunyaa wayyaawaa uumuuf cicha haaraan jalqabuu dhaani.
Akkuma waggaa waggaan taasisamu jamaan NY bakka Times Square jedhutti wal ga’e ennaa kubbaan sun utubaa ol dheeraa irra kaa’ame irraa gad furguggifamuu jalqabu sagalee gammachuun lakkaa’uu dhaan xaaxee xaasessanii waggaa haaraa bara 2018 simatan.
Qorra nama kotteessu keessa uummata kuma dhibba hedduutti lakaa’amutu bakka eegumsi pooliisii fi naga eegudotaan marfametti argamuun waggaa kana simatan.